Indlela yokudibanisa iiglavu kunye neenaliti zokudibanisa, iklasi yeklasi, iifoto ngeyiteyathelo. Iiglavu ezifudumayo ziboshwe ngokubhinqa, i-pattern knitting
Iiglovu zibaluleke kakhulu kwiindawo ezibandayo. Ziza ngobukhulu obuhlukeneyo, imibala, kunye neepateni ezahlukeneyo. Kodwa indlela yokubopha iiglavu ngeenaliti zokudibanisa, kwintleko yakho kunye ngokwezikhulu zomntu ngamnye? Kwabaninzi, lo msebenzi ongenakwenzeka. Ukuba ufuna ukufunda indlela yokugamba iiglavu ngezandla zakho, ngoko isihloko sethu siyakuthandayo. Kwinqanaba lethu lenkosi uza kufunda ukubophelela iiglavu ezifudumeleyo. Ziyinto elula ukwenza, kwaye iminyathelo ngesinyathelo kunye nevidiyo iza kukunceda uqonde indlela yokubopha.
Intambo: I-Ram Angora, i-40% mohair, i-acrylic ye-60%, i-100 g / 500 m, umbala 512
Ukusetyenziswa kwento: 80g
Izixhobo zokuzifumana: isethi yeesithandathu ezintetho ezilinganisa i-2.5 mm, i-hook 1.6 mm, izikhonkwane ezimbini
Ukwazi ukuxininisa kwe-knitting enkulu: 1 cm = 3.3 izilo
Ubungakanani bomkhiqizo: ibhande ye-palm = 17 cm
Ubude bomlenze = 10 cm
Iiglavu ezifudumayo eziboshwe ngeenaliti ezinamaqhina - inyathelo ngomyalelo wesinyathelo
Ukuqokelela i-loops ezingama-20 zesampuli kwaye ubophe i-cm encinane ngepateni yokubeka impahla, ulinganise ububanzi.
Ubuninzi bokubamba: iingubo ezingama-20/6 cm = 3.3 iisango kwi-cm enye.
Iingalo zokubamba isandla sesandla: 3.3 ii-hinges * 17 cm = 56.1. Eli nani kufuneka libe liqela le-4 kule meko elilingana nama-loops angama-56.
Omnye uthetha kufuna ama-loops angama-56/4 izitshixo = izilo ezili-14.
Indlela yokubala iqhosha.
Omnye umnwe kuyimfuneko: 56 iisango / 4 izitshixo = izilo ezili-14. Ekubeni iminwe ihluke, kufuneka udibanise i-1 loop phakathi komnxeba kunye nomtsalane, kwaye uthathe i-1 loop ukusuka kumnwe omncinci kunye nomnwe ongenagama. Ukubhinqa phakathi kweminwe ukuthayipha kwiimilo ezimbini ezongezelelweyo.
(14 + 1) + 2 = = 17 loops kwi-index finger.
(14 + 1) + 4 = = iingubo ezi-19 kumnwe ophakathi.
(14 - 1) +4 = 17 iingubo ezikwiminwe.
(14 - 1) + 2 = = 15 izilwanyana kwiminwe encinane.
Umlenze ophakathi emanqeni + 3 = 22 iingubo ezingama-22 zesithupha.
Gcina omnye umqolo wegum, ukuvala umtya kwiisangqa.
Ukuqhubeka isetyhula ukudibanisa ukubopha ibhanti elastic 3 cm ubude.
Ingxelo yomzekelo we-gum iqukethe izikhonkwane ezi-6: 2 iisango zomlingo, i-4 purl loops.
Ingxelo yephethini inamakhilo ayi-6.
Umqolo wokuqala: abantu 2,, 1., 2 ubuso,.
Umqolo wesi-2: abantu aba-2., 1 ngaphandle, i-Cape, ii-loops ezi-2 zijika kwaye zibophe ndawonye ubuso obunqamlekileyo, 1 ngaphandle.
Umqolo wesithathu: abantu 2,, 1 abantu, 2.
Umgca we-4: abantu aba-2., 1, 2 abantu. ukubopha ndawonye, ​​iKapa, ​​1 kubantu, 2 abantu., 1 Ngaloo ndlela, udibene enye 4.5 cm.
Inkqubo yokubamba iingubo ezi-2 ezitshintshiweyo ekugqibeleni ubuso ziboniswa kwividiyo engezantsi.
Maka amanqaku omabini anesithintelo sesine inaliti ye-knitting kunye nomnye umtya.
Ngamacala omabini aloo misonto, usebenzisa i-capers, engeza enye ye-loop nganye miqolo emi-2. Ngomqolo olandelayo, i-naca idibene ne-crosshair ewela. Oku kuyimfuneko yokutyumba isithupha.
Ukuxhuma, ngoko ke, i-loops ezili-10, ubuyisele kwakhona kwizikhonkwane.
Emva koko, ngaphezu kwabo, shayela ngaphezulu ezili-10 ngaphezulu. Khulisa iingubo ezinamathele ngokuzihlanganisa ndawonye ezimbini, ngomgca kumacala amabini.
Ngaphandle kokubopha u-1 cm ukuya kubude besundu, qala ukubopha umunwe omncinci. Ngomunwe omncinci udinga izikhewu ezili-16. Izilophu ezi-7 zithatha ukusuka kwisibini zithetha, i-7 kunye neengqungqelo zesithathu kunye neebini ze-girth. I-hinge iya kuhlulwa ibe zintetho zintathu.
Ukubopha isiqingatha sesilumko se-pinky ukuze uqale ukunciphisa izikhonkwane: ekupheleni kwesinye ngasinye sokubamba ukudibanisa ezimbini. Ukugqibela kathathu ukuvala.
Yazi iminwe eleyo ngendlela efanayo, faka ii-loops ezi-2 zebhande kumacala omabini eminwe.
Ukudibanisa isithupha ukuze uphinde wenze izikhonkwane kwizikhonkwane ezithethiweyo, inombolo elahlekileyo yokuloba ukwengeza emoyeni nakwiindawo eziphambili.
Emva koko, unamathele njengezwane zangaphambili.
Qaphela: umzekelo wokubamba weglavu yesibini ifana neyokuqala, kuphela ukongeza kweso sikhumba kufuneka kwenziwe kwintetho yesithathu, kwaye umnwe omncinci unamathele ngaphesheya. Zombini iiglavu kufuneka zilingane.
Ngoku iiglavu kufuneka idibaniswe kwaye icwangcise yonke imicu, iqhube i-steam kancane ngensimbi okanye ngendwangu ebomvu.
Iiglavu ezifudumayo zilungele ukukhangela iinaliti. Inkqubo yokubamba iyanzima, kodwa isiphumo sinokubaluleka.
Isikhiti esihle kwiintombazana ezinenwele ezinde
Iimpawu zeekhonkco ze-crochet shawls: imifanekiso kunye neefoto ezityhiweyo
Ukukhethwa kokwenza izibopho ezibomvu nezibomvu
Indlela yokugcina ubudlelwane: umqeshi nomqeshwa
Phila ubomi kunye nomntu ozikhukhumeleyo
Iindlela eziphambili zokupheka kunye nesithombe se-kvass ezenziwe ngamanzi ngaphandle kwesidlo, i-oatmeal, ne-horseradish kunye nobusi, i-beetroot
Ngaba kuyingozi ukutya i-tshokoleta imihla ngemihla?
Iibetho ezibuhlungu ngexesha lokukhulelwa
Isipinashi kunye ne-tofu kunye nelayisi
I-Autobiography yomdlali wesicatshulwa uMaria Aronova
Ngaba ndimele nditshintshe indawo yam yokuhlala?
Iiposiso eziphambili zabazali bezabelo zokuqala zangaphambili
I-Autobiography yomdlali weBrittany Murphy